Read more about नेपाली भाषा सङ्गोष्ठी, २०६७ का निर्णयहरू
Select ratingGive डा. कृष्णहरि बराल मोटर दुर्घटनामा सख्त घाइत्ते 1/5Give डा. कृष्णहरि बराल मोटर दुर्घटनामा सख्त घाइत्ते 2/5Give डा. कृष्णहरि बराल मोटर दुर्घटनामा सख्त घाइत्ते 3/5Give डा. कृष्णहरि बराल मोटर दुर्घटनामा सख्त घाइत्ते 4/5Give डा. कृष्णहरि बराल मोटर दुर्घटनामा सख्त घाइत्ते 5/5
बाहिर हेर्दा टम्म भित्र खाली हुन्छन् मान्छेहरू